नेकपा विवाद : गुट केन्द्रित छलफलबाट फुटको उद्घोष ! – LaligurasNews | सूचना र सञ्चार विकासको पुर्वाधार
नेकपा विवाद : गुट केन्द्रित छलफलबाट फुटको उद्घोष !
२४ कार्तिक २०७७, सोमबार २४ कार्तिक २०७७, सोमबार
सत्तारुढ नेकपा विवाद पछिल्लो समय गुट केन्द्रित भएको छ । नेतृत्व तहमा निर्णायक छलफल हुन नसकेपछि ‘वार कि पार’ गर्न नेताहरू गुट केन्द्रित छलफलमा जुटेका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सोही खेमामा रहेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि संकट मोचनको आ–आफ्नै तयारी छ । उनीहरुलाई साथ दिँदै छन् सचिवालयका आ–आफ्नै गुटका नेताहरुले ।
दाहाल नेपाल पक्षबाट झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ। त्यस्तै ओली पक्षबाट विष्ष्णु पौडेल, ईश्वर पोख्रेल र रामबहादुर थापा ।
ओली, दाहाल र नेपालले आफ्ना समूहका नेताहरुसँग निरन्तर छलफल अघि बढाएका छन् । उनीहरु सकेसम्म पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर बताउँछन् । तर कुनै निकास भने दिन सकेका छैनन् । एक पक्षीय तथा द्धिपक्षीय भेटघाटहरु भैरहेका छन् । नतोहरु सकेसम्म इतर समूहको समीकरण टुटाउनमा लागि परेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताहरुले पार्टीको क्षति न्यूनिकरण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेका छने । उनीहरु विभिन्न समूह मार्फत पूर्व एमालेहरुलाई मिलाएर पार्टी र सरकारको क्षति न्यूनिकरण गर्न लागिरहेका छन् ।
ओली नेपाल दाहाल समिकरण टुटाउन लागि परेका छन् भने नेपाल दाहाल समिकरण बचाउने ध्याउन्नमा छन् । यही दाउपेचबीच इतर समूहका नेताहरुसँग एक्लाएक्लै वा सामूहिक छलफल जारी छ । नेपाल दाहाल समूहका सचिवालय दसस्यले नै पार्टी कार्यालयमा बैठक राखेर सचिवालय बैठकका लागि ओलीलाई आग्रह गरेका छन् ।
तत्काल पार्टी सचिवालयको बैठक बोलाउन माग गर्दै लिखित पत्र बोकेर बालुवाटार गएका कार्यकारी अध्यक्ष दाहालसहित सचिवालयका पाँच सदस्य र प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच घोचपेचपूर्ण संवाद भएको छ ।
सचिवालयका पाँच सदस्यले शुक्रबार धुम्बाराहीमा अनौपचारिक छलफल गरेका थिए ।
त्यसैअनुसार उनीहरुले स्थायी कमिटी निर्णय कार्यान्वयनको, कोभिड–१९ को अवस्था, राष्ट्रियताको विषय, संघीयताका मुद्दामा छलफलको माग गर्दै ओलीलाई दुई पेज लामो पत्र बुझाएका हुन् ।
प्रवक्ता श्रेष्ठले पार्टी एकता रक्षाका लागि तथा समग्र विषयमा छलफल गर्न आइतबार वा सोमबार बैठक बोलाउन लिखित आग्रह गरिएको बताए । स्थायी कमिटीको सर्वसम्मतिले निकालेको निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रियामा समस्या उत्पन्न भएको, कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि नबढेको भन्दै सचिवालयका बहुमत सदस्यले अध्यक्ष ओलीमाथि दबाब बनाइरहेका छन् ।
तरओली बैठकको मिति तोक्न तयार भएनन् । त्यसपछि सचिवालयका नेताहरु पछि सल्लाह गर्ने भन्दै बालुवाटारबाट निस्किएका थिए
ओलीले गुटगत बैठकको निर्णय र अनुरोधका आधारमा पार्टी केन्द्रीय सचिवालय बैठक नडाक्ने अडान लिएका छन् । ओलीले जसले जतिबेला बैठक बसालौँ भन्यो त्यतिबेला बैठक डाक्न आफू नसक्ने अडान लिएका हुन् । शनिबार एपीवान टेलिभिजनको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् ‘ दुई अध्यक्षकाबीचमा परामर्श हुन्छ ।
अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले बैठक बोलाउने हो । एजेण्डाहरु तोकेर, प्रस्ताव तोकेर, कार्यसूची तयार गरेर, यीयी निष्कर्षमा पुग्ने भनेर बैठक गरिन्छ । त्यसैअनुसार बैठक बोलाउने हो । कसैले बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै बैठक बसालौँ भन्यो भनेर हुन्न।’
साथै उनले आफूले पार्टी फुटाउने कुरा पनि नगरेको दाबी गरेका छन् । आफ्नो बदनाम गर्न यस्ता भ्रम सिर्जना गरिएको उनको भनाइ छ।
अहिलेको विवाद बढाृने भारतीय जासुसी स.स्था रअ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँगको भेटको पनि उनले बताउ गरेका छन् । गोयल नेपाल भ्रमणलाई लिएर अनावश्यकरुपमा आफूलाई विवादमा पारिएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।उनले भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’का प्रमुखलाई भेटेर स्वाधिनता मेट्ने काम नगरेको दाबी गरेका छन् ।
उनले आफू र ‘रअ’ प्रमुखसँगको भेटबारे अब स्पष्टीकरण दिइरहन पनि आवश्यक नभएको बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले राजीनामा दिँदा देश डुब्ने कुरो फेरि दोहोराएका छन् । उनले आफूलाई हटाउने कोशिस आफ्नै पार्टीबाट भएपनि आफूले राजीनामा नदिने बताएका हुन् ।
उनले भने,‘ म विरुद्ध कति बैठक अनुचित, अनाधिकृत भए? त्यस्ता बैठकहरुले अस्थिरताको सन्देश दिइरहेका छन्। सरकार परिवर्तन गर्ने, मलाई हटाउने भन्ने प्रचार पनि भइरहेको छ। मलाई दुबै पदबाट हटाउने अभिव्यक्ति पनि दिइरहेका छन्। त्यसले कर्मचारी र मन्त्री दुबैमा अस्थिरताको सन्देश गएको छ। म राजीनामा गर्दिन।’
पार्टीमा विवाद बढ्दै गएपछि शीर्ष नेताहरु आफू पक्षधर सांसदलाई आफ्नै पक्षमा टिकाइराख्ने कसरतमा जुटेका छन् । नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली, कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता नेपाल आफू पक्षका सांसदलाई जोगाउने कसरतमा लागेका हुन् ।
‘दाहाल र नेपालले आआफ्ना पक्षका सांसदलाई सम्पर्क राख्न निर्देशन दिएका छन् । ओलीले आफ्नो पक्षका सांसदलाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गरिरहेका छन् ।
यसरी सचिवालयदेखि तलसम्म नेकपाका सबै कमिटि गुटगत छलफलमा केन्द्रित भएका छन् । फुटको सँघारमा पुगेको पार्टीलाई पार लाउने कि फुटाउने अब यिनै गुटका बैठकले निर्क्यौल गर्ने छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको २४ कार्तिक २०७७, सोमबार २४ कार्तिक २०७७, सोमबार 60 Viewed